UTesla ubuyisela umbane kwisibhedlele sabantwana ePuerto Rico | Ukuhlaziywa okuluhlaza
UTesla ubuyisela umbane kwisibhedlele sabantwana ePuerto Rico
Ngelishwa, sele ingaphezulu kwenyanga okoko kwabakho iNkanyamba uMaria eyatshabalalisayo iPuerto RicoNgapha koko, ishiye phantse yonke loo ndawo icinyiwe kwaye ingenawo umbane.
U-Elon Musk uthe ufuna ukunceda isiqithi Yakha kwakhona igridi yamandla, into ekufuneka siyibonile. Okwangoku, uTesla uqala ukugcina ilizwi lakhe kwaye sele efake inkqubo yamandla elanga esibhedlele.
UTesla ufake inethiwekhi yeepaneli zelanga kunye neebhetri zePowerwall kwiSibhedlele saBantwana kwisixeko saseSan Juan. Ngapha koko, uMusk ngokobuqu inikelwe $ 250.000 ukunceda abemi basePuerto Rico.
Inkqubo yakhiwe ngexesha lokurekhoda. Kuthathe phantse iveki ukufakela zonke iipaneli kunye neebhetri, ngokutsho uphawule elinye lamalungu ebhodi yabalawuli yesibhedlele.
Inkampani ithi inkqubo kwisibhedlele sabantwana yeyokuqala kwiiprojekthi ezininzi ezifanayo. Urhulumente wasePuerto Rico unombulelo kakhulu ku-Elon Musk ngokunceda abantu.
Ngokutsho Irhuluneli Rossello:
“Ndiyabulela uTesla ngokukhetha le ndawo kuba abantwana abaninzi abasemngciphekweni baxhomekeke kuyo. Ngaphandle kwamandla, uninzi alunakho ukufumana unyango lwabo. "
Ukufakwa kwegridi yelanga yeTesla kwisibhedlele del Niño kuza kwiintsuku emva kwegurha yangaphambili yasePuerto Rico, u-Alejandro García Padilla, thumela i-tweet apho ibonakalise iimeko abakuzo ukuzimasa kwizigulana ezininzi zePuerto Rico. Kwifoto ehambe yintsholongwane sinokubona oogqirha besebenzisa isibane see-smartphones ukuze babone.
Okwangoku, kwinyanga emva kokudlula kweNkanyamba uMaria, abantu abangaphezulu kwezigidi ezi-2,5 ePuerto Rico (kwizigidi ezi-3,4 ezihlala kwesi siqithi) basengenawo umbane kwaye abanalo nonxibelelwano.
1 IGogole kunye ne-AT & T.
2 Ezinye iiProjekthi zeTesla (iPowerwall)
IGogole kunye ne-AT & T.
Ezinye iinkampani ezinje ngeGoogle okanye i-AT & T nazo ziyasebenza ukubuyisela unxibelelwano umbane ngakumbi i-intanethi ephathekayo kwesi siqithi.
Ngapha koko, i-Alphabet isebenzisana ne-AT & T ukunceda ukudibanisa abemi, kusetyenziswa iibhaluni zomoya ezishushu zeProjekthi Loon (ephuhliswe licandelo layo le-X Inkampani) kunye nenethiwekhi ye-LTE umnxibelelanisi wefowuni. Okwangoku, iibhaluni zokuqala zisusile kwisiseko sabo sokumiliselwa, kwiphondo laseNevada.
Iibhaluni Iprojekthi LoonNgokwenkampani, banokugubungela ukuya kwi-5.000 yeekhilomitha zommandla. Ngokwenxalenye yayo, i-AT & T iqinisekisa ukuba sele bekwazile ukubuyisela ukufikelela kwi-intanethi kwi-60% yabemi basePuerto Rico, kodwa kusekho sebenza ukwenza. Ukongeza kufikelelo kwi-intanethi, umzamo omkhulu usafuneka ukusombulula iingxaki kunye nokusilela kwigridi yombane kwesi siqithi, ngakumbi ukuthintela into enje ukuba ingenzeki kwakhona.
Ezinye iiProjekthi zeTesla (iPowerwall)
I-Powerwall Ibhetri yenkampani Amandla eTesla, Inkxaso-mali yaseTesla Motors yaseMelika. Iibhetri ze-Powerwall ziyaphinda zihlawulelwe ukusetyenziswa kwasekhaya kunye namashishini amancinci. IpheUfakelo olukhulu iTesla ibonelela I-Powerpack ezinokukalwa ngokungenammiselo ukufikelela kumandla eGWh
Hyperloop Igama lorhwebo elibhaliswe yinkampani yezothutho lwasemoyeni i-SpaceX, ye ukuthuthwa kwabakhweli kunye neempahla kwiityhubhu zokucoca ngesantya esiphezulu.
Umzobo wokuqala weHyperloop yayiyimbono eyathi yenziwa esidlangalaleni ngoxwebhu lokuqala loyilo ngo-Agasti 2013, olwalubandakanya indlela yethiyori edlula kummandla we I-Los Angeles ukuya kwi-San Francisco Bay Area, kuninzi lwendlela yayo ehambelana ne-Interstate 5. Uhlalutyo lokuqala lubonise ukuba ixesha eliqikelelweyo lendlela linokuba Imizuzu ye35, Oko kuthetha ukuba abakhweli baya kucanda indlela eyi-560 yeekhilomitha ngesantya esiqhelekileyo sokujikeleza I-970 km / h, ngesantya esiphezulu se-1.200 km / h.
ISpaceX yasekwa ngoJuni 2002 ngu-Elon Musk ukuguqula itekhnoloji yendawo, ngeyona njongo iphambili vumela abantu ukuba baphile kwezinye iiplanethi.
Iphuhlise iirokhethi zeFalcon 1 kunye neFalcon 9, esele ikho eyakhelwe ngenjongo yokuba ziphinde zisebenzise izithuthi zokumiliselwa kwindawo. I-SpaceX ikwaphuhlise i-Dragon spacecraftcraft, eyasungulwa kwi-orbit yi-Falcon 9 yezithuthi zokumiliselwa.Uyilo lwe-paceX, iimvavanyo kwaye lwenza uninzi lwezinto ngaphakathi endlwini, kubandakanya iinjini zerokethi zeMerlin, Kestrel kunye neDraco.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » UTesla ubuyisela umbane kwisibhedlele sabantwana ePuerto Rico